Maxkamada ciidamada Puntland oo 43 dagaalyahan oo al-Shabaab ku xukuntay dil - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeMaxkamada ciidamada Puntland oo 43 dagaalyahan oo al-Shabaab ku xukuntay dil
June 18, 2016 Puntland Mirror Home, Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada militariga dowlada Puntland ayaa dil toogasho ah ku xukuntay maalintii Khamiista 43 dagaalyahan oo al-Shabab ah, sida ilo-wareedyo dhanka ciidanka ah ay u sheegeen Puntland Mirror.
43 dagaalka yahan oo al-Shababka ah, ayaa lagu helay in ay ka qayb qaateen dagaalkii dhiiga badan ku daatay oo bartamihii bishii Maarso dhexmaray ciidamada dowlada Puntland iyo kooxda al-Shabaab.
Intii ay socotay maxkamadaynta xubnaha al-Shabaab, warbaahinta maxaliga ah ayaa loo diiday maxkamada.
Sarkaal katirsan ciidamada Puntland oo magaciisa codsaday in aan la sheegin ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in xubnaha dilka lagu xukumay ay da’adoodu ka weyntahay 18-sanno, waxaana uu xusay in ay ku jiraan ilaa iyo 4 xubnood oo da’adoodu tahay ilaa 70-sanno.
Dhawaan, Madaxweynaha Puntland oo la hadlayay saxaafada, ayaa Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali waxa uu balanqaaday in ay dhaqan-celin u sameyn doonaan dhalinyarada yar yarka ah ee xabsiga ku jira si dib loogu cesho qoysaskoodii.
Dagaalkii bartamihii bishii Maarso ka dhacay xeebaha badweynta Hindiya oo u dhaxeeyay ciidamada dowlada Puntland iyo al-Shabaab ayaa waxaa kooxda al-Shabab looga dilay dagaalyahano ka badan 100 halka dowlada ay ku weyday in ka badan 20 askari.